လမ်းလျှောက်အိုး အကြည် VIP
Now you can advertise on our site. You click ads by JuicyAds
bottom of our advertisement. Here also>
လမ်းလျှောက်အိုး အကြည် VIP >
07-22-2019, 02:13 PM (This post was last modified: 07-22-2019, 02:41 PM by Administrator.)
ဒါကတော့ နောင်တော်တစ်ယောက်ရဲ့ အနုပညာလေးပါ။ ဒီလိုရိုက်တက်ဖို့က ခက်ပါတယ်။ အရိပ်အကဲ လည်း အရမ်းကိုကြည့်ရတယ်။ နည်းပညာလည်း လိုပါတယ်။ ရင်ဘတ်နဲ့လည်း ဆိုင်ပါတယ်။ တစ်ကားကို လေးရားကျပ်ပဲ ကျပါတယ်။ တကယ်လို့ ကြိုက်တယ်ဆိုရင် အဲ့မှာဖုန်းနံပါတ်ပါပါတယ်။ ဆက်သွယ်ပြီး ဝယ်လို့ရပါတယ်။ ဒါက သူ့ရဲ့ vk လိပ်စာပါ
https://vk.com/id535711400 သူ့ဆီက ကားတွကို vip ခန်းထဲမှာ တင်ထားပါမယ်။ ကျွန်တော့်ဆိုက်က vip သမားတွေကတော့ ဒီကားတွေကို ဖရီးဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ်။ တကယ်လိုများ ကိုယ်တိုင် ဝယ်ပြီး သ်ိမ်းထားချင်တယ်ဆိုရင် ဆက်သွယ်လိုက်ပါ။
ပုံတွေပေါ်မှာ ဖုန်းနံပါတွေပါပါတယ်။ အဲ့လို မျိုးရိုက်တက်သူတွေရှိရင် vip ပေးပါမယ်။ ဖုန်းကတ်ွေနဲ့ ဝယ်ပါမယ်။ တစ်ကား လေးရာ က တန်ပါတယ်။ တော်တော်ရင်းပြီးရိုက်ရတာမို့ပါ။
ကြိုက်တယ်ဆိုရင် လိုချင်တယ်ဆိုရင် ကွန်မန့်ပေးသွားနိုင်ပါတယ်။ အမြင်တွေကို ဖလှယ်ပေးကြပါဦးဗျာ.
vip ဖွဈခငျြရငျ [email protected] ကို MPT TELENOR ငါးထောငျတနျ တဈကတျ ပို့လိုကျပါ။ ဒီအောကျကပုံ ကိုကလဈပွီးတော့လညျး ပို့နိုငျပါတယျ။ သုံးလစာတဈခါတညျးဝယျရငျတော့ VIP ELITEပါ ရပါမယျ။
မတှဘေူ့းရော အဲ့ video တှေ vipမှာ
အဲ့လူကို ဆကျသှယျလို့ကိုမရတော့တာ။ ဖုနျးဆကျလို့လညျး မရ စာပို့လို့လညျးမရ
Forum Jump: Private Messages User Control Panel Who's Online Search Forum Home Special Thailand -- VERY GOOD THAILAND FOODS ဇတျကားမြား -- ဇတျကားမြားကွညျ့ရနျနှိပျပါ မွနျမာဓါတျပုံမြား Myanmar Photos -- မွနျမာဓါတျပုံမြား ကွညျ့ရနျ နှိပျပါ။ Myanmar Photos အရမျးကောငျးတဲ့ ဇတျကားမြား vip forum -- အရမျးမိုကျတဲ့ဇတျကားတှရှေိတယျ vip room -- စြေးကွီး ရှားပါး ဇတျကားမြား -- တရားဝငျ ဆယျကြျောသကျ ထူးရှယျ အခနျး ElITE VIP -- ထူးရှယျ ဇတျကားတှေ VIP ELITE SECTION မနျဘာဝငျမြား အတှကျသာ -- မွနျမာတှေ အတှကျ သီးသနျ့ -- ဝဘျဆိုကျနဲ့ ပတျသတျသမြှ ကာမ စာအုပျမြား -- ကာမ ဇတျလမျး စာအုပျမြား asianscandal -- အာဆီယံ ဇတျကားမြား asian scandal